नवलपुरमा सवारी दुर्घटना न्युनिकरण हुन सकेन , एक बर्षमा ९७ जनाको मृत्यु -
कावासोती ५ असार । नवलपुर जिल्लामा सवारी दुर्घटना न्युनिकरणका लागि प्रयासहरु भईरहेपनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन । अघिल्लो आर्थिक बर्ष भन्दा गत आर्थिक बर्षमा सवारी दुर्घटनाको संख्यामा बृद्धी भएको छ ।
आ.व. ७५÷७६ मा जिल्लामा कुल १ सय ६१ वटा सवारी दुर्घटना भएको थियो । आ.व. ७४÷७५ मा भने ७७ सवारी दुर्घटना भएका थिए । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार एक बर्षको अबधिमा ९७ जनाले सवारी दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका छन् । ति दुर्घटनाहरुमा परेर २९३ जना घाईते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले जानकारी दिएको छ । घाईते मध्ये १२९ जना गम्भिर र १७२ जना सामान्य घाईते भएका थिए ।
आ.व. ०७४÷७५ मा भने जिल्लामा ६३ जनाले सवारी दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका थिए । दुर्घटनामा परि ८५ जना गम्भिर र ७९ जना साधारण घाइते भएका थिए । ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बर्षभरिनै जिल्लामा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम संचालन गरेपनि दुर्घटनामा भने कमी आउन सकेन । सडकको अबस्था , सवारी चालकको लापरवाही आदी दुर्घटनाको मुख्य कारण रहेको प्रहरीको भनाई छ । आ.व. ०७५÷०७६ मात्र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ३ हजार ८ सय ९५ जना बिद्यार्थीलाई ट्राफिक नियमका बारेमा जानकारी गराएको थियो । यसैगरि कार्यालयले ११ हजार भन्दा बढी चालक र सहचालकहरुलाई ट्राफिक कार्यालयले सवारी ऐन नियम र ट्राफिक नियमका बारेमा जानकारी गराएको थियो ।
७ हजार ३ सय ९३ जना सर्वसाधारणहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रममा सहभागिता गराईएको थियो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार बिभिन्न चार स्थानमा गरिएका बृहद् अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा ३ सय ५५ जना सहभागि थिए । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गत आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ मा एक करोड भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ । नवलपुरबाट गत आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ मा १ करोड २ हजार राजश्व संकलन भएको हो । बर्ष भरि गरिएका कुल १६ हजार ६ सय १९ कारवाहीबाट यो राजश्व संकलन गरिएको हो ।